Xildhibaan Cabdi Shire oo ku baaqay in fursad la siiyo Dowladd... | Universal Somali TV
Xildhibaan Cabdi Shire oo ku baaqay in fursad la siiyo Dowladda Madaxweyne Farmaajo
May 17 2017 07:40:43
Cabdi Shire Jaamac (Ciyaar Jecel) oo xubin ka ah Mudane-yaasha Baarlamaanka Somaliya, ayaa waxaa uu ku baaqay in fursad la siiyo Dowladda Madaxweyne Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo).
Xildhibaan Cabdi Shire Jaamac, ayaa sheegay in dowladdu ay dhisan tahay muddo billo uun ah, isla-markaana aan loo baahnayn in buuq siyaasadeed lagu furo.
Wuxuu qiray in ay jiraan dad dhaliilsan hannaanka dowladda, hase ahaatee wuxuu ku baaqay in dhaliishoodu noqoto mid wax dhista, oo aanay noqon mid wax burburisa.
Xildhibaanka, ayaa soo hadalqaaday in bulshada Somaliyeed ay si weyn u soo dhaweysay is bedelkii dalka ka dhacay afar bilood ka hor, laguna soo doortay Madaxweyne Farmaajo, isla-markaana uu rajeynayo in is bedelkaasi uu noqdo, sidii ay shacabka doonayeen.
Cabdi Shire Jaamac, ayaa waxaa uu ballanqaaday in uu noqon doono ninka ugu horeeya ee ka horyimaada dowladda, haddii is bedelkii looga baahnaa aysan la imaan, balse uu marka hore ku baaqayo in waqti la siiyo.
Hadalka Xildhibaan Ciyaar Jecel, ayaa ku soo beegmaya, xilli toddobaadkan Magaalada Nairobi looga dhawaaqay madal cusub oo la magac-baxday (Madasha Horusocod), oo ay ku mideysan yihiin 88 Xildhibaan. Xildhibaanadan waxay mucaaradsan yihiin Dowladda Farmaajo.
Kan-xigaWakiilka Qaramada Midoobay oo soo jee...
Kan-horeXildhibaanada Madasha Horusocod oo ku...
34,163,354 unique visits